Qoob ka ciyaarka | KONGOLISOLO
Soo ogoow yaababkii caruusnimada ee Ilê Aiy in ee Brazil: Tartankii quruxda Madow / Afrikaanka, "Madoow / Afrikaanka Aesthetics, muusikada, qoob-ka-ciyaarka, hiddaha, dhaqanka boqorada, cibaadada, ilaahyada madow / Afrikaanka, geesiyaasha iyo geesiyaasha", sheekada dhabta ah ee dadka madow / Afrikaanka ee u adkaystay dulmiga addoonsiga… (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: July 19, 2020 00: 00 No Comments
Wax walbaa way jiraan wax walbana way jiraan; carnival-ka Brazil ee Ilê Aiyê waa adduun dhan, waa aduunyo sharaf, sharaf iyo yaabab dadka Madow / Afrikaanka ah; in badan oo ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: May 23, 2020 00: 10 No Comments
Laakiin reer Seerbiya hal illoobeen: Mobutu ma ahayn Ilaah. Wuxuu ahaa aadam bini aadam ah oo seexday oo addoonsaday. Oo sayidkii laftiisu wuxuu ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Abriil 18, 2020 00: 10 No Comments
Sannadihii 1965-kii, Nico Kasanda iyo Rochereau Tabou waxay siidaayeen hees la yiraahdo Bia ntondi Kasanda (Kasanda, j'en ai marre). Gabaygaan, waxay ku ciyaaraan ereyo ku xiran magaca ...	Akhri wax dheeraad ah
Qoob-ka-ciyaarka Kongo: Qoob-ka-ciyaarka Kongo ayaa caan ku ah adduunka oo dhan "Haddii ay tahay Ndombolo Kigwe, Mutwashi ee Baluba iyo Bonyomo ee Mongo (...)" Waxay ku ciyaaraan si gaar ah - si tartiib tartiib ah ayey u leexinayaan sinta iyo barida… ( VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Abriil 16, 2020 11: 47 No Comments
Sinta iyo barida waxay kudhamaadaan qoob ka ciyaarka Congo. Waxay u shaqeeyaan qaab, waxay umuuqataa, xiiso badan. Qoob-ka-ciyaarayaashu, qaasatan, waxay muujiyaan naftooda iyo ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Nofembar 17, 2019 05: 05 No Comments